"Malaha Tayo Uu Liverpool Ugu Ciyaaro!!" - Dietar Hamman Oo Magacaabay Xiddig Dheeraad Ku Ah Kooxdiisii Reds - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha“Malaha Tayo Uu Liverpool Ugu Ciyaaro!!” – Dietar Hamman Oo Magacaabay Xiddig Dheeraad Ku Ah Kooxdiisii Reds
Xiddigii hore ee khadka dhexe ee kooxda Liverpool ee Dietar Hamman ayaa kaddib guushii cidhiidhiga ahayd ee ay kooxdaasi kasoo gaadhay dhigeeda Atletico Madrid kulan ahaa wareega Group-yada Champions League weerar ku qaaday khadka dhexe ee Naby Keita.
Keita ayaa aaminsan in Keita oo kulankaas gool usoo dhaliyay Liverpool uu sidoo kale ahaa midka qaladka ku lahaa in labada goolba kooxda laga soo dhaliyo.
Reds ayaa 2-0 ku qabtay hoggaanka xilli horeba balse weerar is-daba joog ah oo ay Atletico qaaday ayaa ka caawiyay inay kusoo laabtaan natiijada kulankaas kahor inta uusan Mohamed Salah rigoore xilli dambe ah ka dhalinin.
Goolka koowaad ayuu Thomas Lemar si sahlan ku maray Keita iyadoo halkaas ay ka bilaabatay ciyaarta goolka furitaanka ee uu Atleti u dhaliyay Antoine Griezmann kahor inta uusan goolka labaad Joao Felix markale dhaafin Keita si uu u caawiyo Griezmann.
Keita ayuu wakhtigii nasashada bedel ku sameeyay tababare Jurgen Klopp isaga oo keenay Fabinho walow uu tababaraha ree Germany ku dooday inuu marka horeba sii qorsheeyay inuu Keita xilligaas bedel ku sameeyo.
Hamman oo Liverpool 283 kulan usoo ciyaaray ayaa aaminsan in Keita uusan lahayn tayo ku filan oo uu kooxda ugu ciyaaro isaga oo dusha ka saaray eeda goolashii Rojiblancos.
“Waa inaan idhaahdo, waxaan filayaa inuu Keita qalad kulahaa labadii gool ee Atletico” ayuu ugu horreynba xiddigii hore ee Germany u sheegay talkSPORT.
“Waan ogahay inuu dhaawacyo lasoo kulmay laakiin uma malaynayo inuu yahay mid in ku filan wanaagsan si uu Liverpool ugu ciyaaro. Haddii aad dhaliso gool sidii uu sameeyay oo kale waa inay kalsooni kaa buuxsanto, waa inaad waajibaadkaaga daafac qabato, waxaan qabaa dareenka ah inuu kaliya doonayo inuu kubadda ciyaaro marka Liverpool kubadda haysato.”
ILAAH BAAN IDINKU DHAARSHEE BAL WAXAY QORYAAN EEGA
Waa cunsiryadii oo qof ah
Nin madoow hadalkiisa waa cunsuriyad.
Waa runtiis keita uma qalmo in uu Liverpool u ciyaaro. Waa wiil Wnaagsan Laakiin waa ka xumahay. Wuuu gaabiyaa. Raacidiisa waa liidataa. Dareenka agagaarkiisa lama socdo ikta badan
Khadka cayaaryahan ka iyo dhalunta goalka waa kala labo